Vision6 mampifangaro hetsika ho an'ny fanasana sy fitantanana lisitry ny vahiny | Martech Zone
Vision6 dia mampifangaro hetsika ho an'ny fanasana sy fitantanana lisitra ho an'ny vahiny
Talata, Febroary 28, 2017 Douglas Karr
Vision6 manana fampidirana vaovao miaraka amin'ny sehatra teknolojia hetsika, Eventbrite, ho an'ny mpivarotra hitantana mora ny fanasana sy ny fifandraisana amin'ny hetsika. Ny sehatra dia mamela anao:
Mamorona fanasana - Mamorona fanasana hetsika tsara sy namboarina izay mahavariana ny vahininao.
Ampifanaraho amin'ireo vahiny - Ny lisitry ny vahinin'ny hetsika dia mitroka mivantana avy amin'ny Eventbrite ka manamora ny fifampiresahana isaky ny dingana.
Automate - Manangana andiany iray hitantanana mora ny fisoratana anarana, fampahatsiahivana ary fanaraha-maso ny hetsika taorian'ny hetsika.
Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny angon-drakitra fanatrehana, mora dia sarotra ny mitantana ny fisoratana anarana amin'ny vahiny sy ny fifandraisana amin'ny hetsika. Ny Vision6 dia manampy ny mpanjifa hanomboka ny hetsika misy azy ireo miaraka amin'ny maodely fanasana tsy manam-paharoa tonga lafatra amin'ny tranga rehetra. Miaraka amin'ny maodely tsara tarehy maro azo isafidianana, ny mpanjifa dia afaka mandefa fanasana misy vokany be ao anatin'ny minitra vitsy. Ny tonian-dahatsoratry ny drag-and-drop dia manamora ny famoronana fanasana matihanina ao anaty minitra, na dia ho an'ireo vao manomboka aza.
Rehefa avy namorona hetsika tao amin'ny Eventbrite dia afaka misafidy avy hatrany ny hetsika mihetsika ny mpanjifa avy amin'ny menio dropdown ao anatin'ny Vision6. Ny antsipirian'ny vahiny dia ampidirina avy hatrany miaraka amin'ny fandefasana fotoana maharitra izay manaraka ny fanovana sy ny fisoratana anarana vaovao rehefa mitranga izany. Rivotra ny fandefasana ny fifandraisana amin'ny fotoana voafetra toy ny fanamafisana, fampahatsiahivana ary antsipirian'ny andro.
Tena tiako ilay fampidirana vaovao. Amin'ny maha-drafitra hetsika matihanina ahy dia nanamora ny fiainako izany. Tsy afaka nifaly kokoa aho! Lisa Renneisen, mpiara-manorina ny Konferansa mamirapiratra
Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny tapakila amin'ny tatitra sy ny fandrefesana, ny mpanjifa dia afaka manangona mora foana ny fanehoan-kevitra aorian'ny hetsika ary mamaky firaketana vaovao amin'ny taona ho avy. Ny talen'ny hetsika sy ny mpivarotra dia afaka mifantoka amin'izay zava-dehibe indrindra - mamorona hetsika tsy hay hadinoina tokoa.
Nangataka anay ny mpanjifa mba hanisy fitantanana hetsika mandritra ny fotoana maharitra. Tena faly izahay hiara-hiasa amin'ny mpitarika indostria toa ny Eventbrite hahafahan'ny mpanjifanay mitondra ny hetsika ataon'izy ireo amin'ny dingana manaraka. Mathew Myers, CEO CEO6
Tsidiho ny pejy Eventbrite an'ny Vision6
Tags: fifandraisana amin'ny hetsikamailaka hetsikalisitry ny vahiny hetsikatapakila hetsikaeventbritezava-mitrangafitantanana lisitra vahinyhetsika smsvision6
PaveAI: Nisy nahita ihany ny valiny tao amin'ny Google Analytics!
Ecrebo: manokana ny zavatra niainanao POS